Global Aawaj | कस्तो दुःखद संयोग ! दुई सम्धीको एकैदिन निधन कस्तो दुःखद संयोग ! दुई सम्धीको एकैदिन निधन
दाङ्ग । तुलसीपुर-११ निवासी ७६ बर्षिय रेशम बहादुर भण्डारीको गत शनिबार कुर्सीबाट लडेर निधन भयो । उता घोराही-९ निवासी ६७ बर्षिय चिन्ता बहादुर बुढाथोकीको कारोना संक्रमणकै कारण शनिबार राति उपचारकै क्रममा निधन भएको थियो । भण्डारीको कुर्सीबाट लडेर गम्भिर घाईते भई भैरहवामा उपचारकै क्रममा शनिबार राति निधन भएको थियो भने सोहि दिन बुढाथोकीको कोहलपुरमा कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको थियो ।
बुढाथोकीलाई गएको कात्तिक २६ गते संक्रमण देखिएको थियो । भण्डारी र बुढाथोकी नाताले सम्धी हुन् । भण्डारीका माईला छोरा अर्जुन भण्डारीले बुढाथोकीकी छोरीसंग विवाह गरेका छन् । तर, कस्तो संयोग ! उनीहरु दुवै जनाको एकै दिन निधन भएको छ । दुवै जनाको एकैदिन निधन हुँदा अर्जुन भण्डारी र उनका श्रीमतीलाई पीडा माथि पीडा थपिएको छ । यता भण्डारीका पुजनिय वुवाको निधन भएको छ भने उता आफनै ससुरा बुवाको निधन भयो । यो दु:खदायी घटनाको पिडालाई कल्पना समेत गर्न नसकीने उनको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ ।
भण्डारी तत्कालिन उरहरी गाविसका अध्यक्ष ,प्रधानपन्च र उरहरी माध्यामिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति समेत भएर काम गरेका थिए भने बुढाथोकी नेपाल शिक्षक संघका पुर्व केन्द्रिय उपाध्यक्ष हुन् । भण्डारीको परम्परा अनुसार दाहसंस्कार गरिएको छ भने बुढाथोकीको कोरोना संक्रमणका कारण दाहसंस्कार गर्न पाएनन् ।